खुइलिएको तालुको बारेमा
नलेखेको धेरै भो, विषयको कमीले भनौ या समयको व्यस्तताले। हुन त म ऐना तेती हेर्दिन, तेती के भनौ, हेर्दै हेर्दिन भने पनि हुन्छ, तर आज ऐना हेर्दाहेर्दै एउटा लेख्ने कुरो भेटियो।आफैसंग सम्बन्धित कुरो पर्यो, तालु खुइलिनु। बुढेसकाल लागेपछि भए त केहि लाग्दैनथ्यो होला, यो तीस वर्ष पनि नपुग्दै यस्तो भाकोले पो चिन्ता लाग्या हो त। कपाल झर्ने समस्या त पहिले देखि नै थियो तर यो दर्दनाक स्थितिमा यति छिटै पुग्ला भन्ने चाही लागेको थिएन। तर जे होस्, उमेरमै तालु खुइलियो। तालु खुइलिएको कारण सबैभन्दा ठुलो समस्या के हो भने सबैले बुढो भनेर सोच्ने। जुल्फी लर्काएर हिड्नु पर्ने बेलामा टोपीले टाउको ढाकेर हिड्नु पर्ने भो।दाजु भाइ संगै बसेको बेलामा दाइलाई चाही भाइ हो भन्दा tension हुने, अरु त खैर ठिकै छ। तर कपाल नभाको फाइदा पनि त छ नि। एक त कपालमा लगाउने gel,तेल किन्नु परेन, अर्को काइयो चाहिएन। अर्को झगडा परेको बेला श्रीमतीले कपाल तान्ली भन्नु पनि परेन!! विहे नहुँदासम्म अलि tension नै हुन्थ्यो, केटीहरुले विहे नै गर्न नमान्ने हुन कि भनेर, अब त यो समस्या पनि रहेन। केहि वर्ष अघि college मा पढाउँदाखेरि कपाल झरेर cap लगाए…
"आएको थियो, गयो भन्दिनू"-मयुर टाइम्स
सार्है हल्लाखल्ला सहित बजारमा आएको नारायण वाग्लेको नयाँ उपन्यास पढियो। नेपाल गएको अवसर थियो, फर्केर आउँदा बाटोमा Transit पनि लामै थियो, तेसैले किताब पढ्ने मौका जुर्यो। हुन त किताब पढ्नलाई अवसर नै जुर्नुपर्ने त होइन, यो पटक भने तेस्तै पर्यो। लेखकको पहिलो उपन्यास पढिसकेको भएर पनि यो पढ्नलाई थप उत्साह जागेको थियो। हुन त स्कुल पढ्दादेखि नै कान्तिपुरको कोसेलीमा प्रकाशित हुने कफी गफ बाट नै नारायण वाग्लेको लेखहरु पढ्न रमाइलो लाग्न थालेको हो। पल्पसा क्याफे पढेपछि झन fan नै भैयो भन्दा नि हुन्छ।धेरैले साहित्यिक दृष्टिकोणमा तेस्तो उच्च कृति नै भने होइन भनेका पनि हुन्, तर आफुलाई भने राम्रो लाग्यो। हुन त मदन पुरस्कार नै पायो, कसरी थिएन भन्नु। जे होस्, अहिले कुरा मयुर टाइम्सको गर्न लाएको हो, अरुनै कुरामा पो अल्मलियो।
माओबादी समस्या(?) वार्ताबाट समाधान हुने भएपछी देशमा शान्ति होला भनेर सोचेका जनताले फेरी तराई र मधेशमा चर्किएको अन्दोलनले गर्दा सोचेको जस्तो खुशी पाउन सकेनन। नेपालमा पहिले नदेखिएको सम्प्रदायिक भावनाले मधेशमा फेरी समस्या शुरु भयो। हुन त समस्या कहाँ नभएका हुन् र, तर पनि मधेशका पिडित जनत…